Ukuba ukhe wavelisa okanye ulawula indawo ye-ecommerce, enye into ebaluleke kakhulu kodwa edla ixesha kukukwazi kwakho ukugcina iifoto zemveliso ezisecaleni ezincoma indawo. Oosomashishini abathathu baseDenmark abathe bakhathala kukungena kwingxaki efanayo yokudana emva kokuveliswa kwemveliso IPixelz, iqonga lenkonzo eliya kuthi hlela, uphinde uphinde ulungiselele imifanekiso yemveliso yakho, ukhulule uyilo lwakho uyile.
Unobuchule bokwenza ngokusesikweni imveliso ekulindelweyo yokuqinisekisa ukuba zakhelwe iimfuno zakho zorhwebo.
Isitudiyo sePro -Ibonelela ngayo yonke into ekwiSolo ukongeza ekubambeni kwakhona ngokwesiko, ukuthelekisa umbala, ukubuyela umva, ukuhamba komsebenzi, kunye nokukhwela kwizitudiyo zeefoto zobungcali. Kubandakanya isivumelwano senqanaba leenkonzo, ukukhwela kubuchwephesha, ulawulo lweakhawunti olunikezelweyo kunye nabasebenzisi abaninzi.